Learn Android Developing - MYSTERY ZILLION
Learn Android Developing
Android Developing နဲ ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာချင်ပါတယ် ဘာတွေသိသင့်တယ် ဘယ်ကနေစတင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြကြပါဗျာ၊ java ကိုတော့အနည်းနဲ ့အများသင်ယူထားပါတယ်၊ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဘာဆိုဘာမှနားမလည်လို ့ပါခင်ဗျာ။​ website အညွန်းတွေများရှိရင် ေ၀မျှပေးကြပါခင်ဗျား အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်၊
You need to know Java.
You must used it Android before because you need to know android UI/UX.
You need to know what is XML
thanks ,I was waiting for your comment about one week
@Tuang_Pi sorry for reply late
it's ok...thank you so much @saturngod